Itoobiya Oo Holac Siyaasadeed Madaxa La Gashay, Dhibaatooyin Kasoo Fool Leh Deegaamo Cusub Iyo Xaaladda Guud Ee Dalka Oo Qas Ka Muuqdo - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaItoobiya Oo Holac Siyaasadeed Madaxa La Gashay, Dhibaatooyin Kasoo Fool Leh Deegaamo Cusub Iyo Xaaladda Guud Ee Dalka Oo Qas Ka Muuqdo
Addis Ababa (Jigjigaonline) – Qowmiyadda Sidaama oo ah qowmiyadda ugu badan qowmiyadaha ku bahoobay deegaanka shucuubta koonfureed ee dalka Itoobiya, waxay si iskood ah maalinti khamiista ugu dhawaaqeen deegaan iyaga u gaar ah caasimaddiisuna tahay Hawasa.
Magaalada Hawaasa oo ah caasimadda deegaanka shucuubta koonfureed ee dalka Itoobiya waxaa ka socdo mudaharaadyo ay qowmiyadda Sidaama ku dalbaneyso in ismaamul gaar ah loo sameeyo.
Xisbiga deegaankaasi ka arrimiya ee SPDP oo shir 10 maalmood u socday uu u soo gabagaboobay ayaa sheegay inuu dib u dhigay codsiga qowmiyaddaasi ee ku saabsan iney ismaamul gooni ah noqdaan.
Guddiga doorashooyinka qarankana wuxuu sheegay codsiga qowmiyadda Sidaama sida uu dastuurka dalkaasi dhigayo in looga jawaabayo guddiguna uu diyaarinayo afti qowmiyaddasi laga qaado, aftidana uu qabanayo dabayaaqada sanadkan.
Dhallinyarada Qowmiyadda SIDAMA
Afhayeenka Xisbiga siyaasadeed ee dhaqdhaqaaqa xureynta Sidam SLDP Desalegne Megersa wuxuu sheegay aftida la qaban rabo bisha November uu yahay mid aan la aqbali kareyn oo loo baahan yahay in ciodsiga shacabka la aqbalo.
Mate Mengesha oo u dhaqadhaqaaqa xorriyadda shacabka wuxuu sheegay ciidamada ammaanka iney hor istageen shir ay yeelan lahaayeen odayaasha qowmiyaddaasi iyo ururka dhalinyarada oo ay rabeen iney si rasmi ah ugu dhawaaqaan deegaan iyaga u gaar ah.
Kusimaha xafiiska nabadgalyada ee deegaanka shucuubta Koonfureed Andinet Ashanafi oo saaka BBC u warramay wuxuu sheegay iney magaalada ay xoogaha deggan tahay walow ay rabshada aan badnayn xaafadaha qaar ay ka dhacayaan.
“Magaalda Hawasa hareeraheeda waxaa laga maqlayaa rasaas googoos ah. Waddooyinkana mudaharadayaashu waxay ku gubayaan taayarro iyaga oo dhagaxaan waaweyn jidgooya ku sameeyey. Qofwalba wuu cabsanayaa oo guriyaha lagama soo bixi karo, meel kastana waxaa taagan ciidamo hubeysan” ayuu yiri Dr Abel Gedefaw oo ah agaasimaha kulliyadda caafimaadka jaamacadda Hawasa.
Xaaladda ka taagan deegaanka shucuubta koonfureed ee ay qowmiyadda Sidama ku dooneyso iney deegaankaasi ka go’do oo ay ismaamul gooni ah sameysato ayaa lagu sheegay iney tahay madax xanuun siyaasadeed oo hore leh oo ku soo kordhay Ra’isal Wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed.
Dadka falanqeeya siyaasadda Itoobiya waxay arrintan ku tilmaameen mid sii murjin karto siyaasadda dalka Itoobiya isla-markaana dhiig badan uu ku daato. Haddii qowmiyaddan codsigeeda la yeelo waxaa iman kara qowmiyada kale oo iyaguna ismaamul horay u codsaday iyada oo ay qowmiyadda Sidaama durbadiba labeysay qowmiyadda Walayta oo ka tirsan ismaamulka shucuubta Koonfureed.
Qaab dhismeedka dalka Itoobiya ee hadda jira oo ka kooban 9 dowlad deegaan (ismaamul), dastuurka dalkaasi uu ku dhqmo wuxuu dhigayaa qowmiyadda codsato iney ismaamul gooni ah noqoto ama sameysatyo laga billaabo maalinta ay codsigeeda dowladda dhexe u gudbisay hal sano gudahii in afti loo qaadayo.
Markii uu isbaddallo taarikhi ah ka sameeyay dalkiisa, Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Dr Abiy Axmed waxaa soo wajahday handadaad iyo halis, dilkii madaxii ciidammada guud ee dalka Itoobiya kaddib afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay gobolka Amxaarada waxaa ay dhacdadaas noqotay mid halis ku ah hannaanka isbaddallada ka socda dalkaas, weriyaha BBC Fergal Keane, ayaa waxaa uu eegaya caqabadaha soo wajahay hoggaamiyaha ugu da’da yar qaaradda.